အရမ်းရှက်တယ် ရွှေမြန်မာရယ်………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » အရမ်းရှက်တယ် ရွှေမြန်မာရယ်……….
Posted by Wai Yan Lay on Jul 29, 2011 in Critic | 17 comments
မနက်အင်တာနက်ဖွင့်ကြည့်တော့ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတခုက ဆီးကြိုလို့ နေပါတယ်…. ဘောလုံးပွဲမှာ မြန်မာတွေ ရိုင်းလို့ ပွဲပျက်သွားတယ်တဲ့ တကယ်ကို ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်… မနက် ရုံးရောက်ကတည်းက ဘောလုံးပွဲရလဒ်ကိုသိချင်နေတာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက လွင့်တာကို ကြည့်ဖို့ မအားတာနဲ့ ရုံးရောက်လို့ အင်တာနက်ဖွင့်ကြည့်မှပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့တယ်… ရှုံးတယ်၊ နိုင်တယ် ဆိုတာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတိုင်း ကြုံတွေ ရမှာပဲလေ ဒါကို လက်မခံနိုင်လို့ ဟိုဟာနဲ့ ပစ်ပေါက် ဒီဟာ နဲ့ ပစ်ပေါက် ဆဲဆိုနေလုိ့ နိုင်မယ်လို့ များထင်နေကြလားမသိဘူး၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဒီလို လုပ်လိုက်တယ်ဆိုကတည်းက ထပ်ရှုံးသွားပြီး ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကို သူများနိုင်ငံတွေက အထင်သေးသွားပြီ၊ မလုပ်သင့်ဘူးဗျာ လုံးဝလုံးဝပဲ၊ ဘာဖြစ်လဲ ရှုံးတာ ၊နောက်တခါနိုင်အောင်ကြုိးစားမှာပေါ့ အခုတော့ ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ ဘယ်နိုင်ငံတကာပွဲတွေ ကျင်းပရဲတော့မှာလဲ ၊ မြန်မာတွေက ရှုံးလာရင် ဒီလို လုပ်တတ်ပါလားလို့ ဆိုတဲ့ အတွေးကြီးသူ့တို့ ခေါင်းထဲမှာ ဝင်သွားပြီလေဗျာ၊ အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား. အရမ်းကိုရှက်ရပါတယ် ကျွန်တော်လေဘယ်လိုကိုပြောပြရမလဲ မသိဘူးဗျာ……. နောက်ဒီလိုမျိူးတွေထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို ဆုတောင်းရပါတယ်၊…………နှစ်ခါမရှုံးစေဖို့ မြန်မာတွေသိစေချင်ပါတယ်……..
မနေ့ကတည်းက ကြားတယ်။ စိတ်တော်တော်ပျက်သွားတယ်။
ဒီမနက် သူတို့တည်းတဲ့နေရာကိုရောက်မိလို့ အဲဒီ ဝတ်ရုံဖြူ ဦးပေါင်းထုပ်နဲ့ လူတစ်ယောက်ရယ် အိုမန်အသင်းအကျီ င်္နဲ့လူတွေရယ်ကိုတွေ့တော့
စိတ်ပျက်လို့ အရင်ကထဲက မကြည့် လိုက်တာ
မနေ့ကတည်းက ရှက်တာ။ တိုက်ရိုက်ပြတဲ့ပွဲလေး အေးဆေးကြည့်ရမလားမှတ်တယ် ကွန်နက်ရှင်က စုတ်၊ မြန်မာတွေ ဟိုပစ်ဒီပစ်နဲ့ ပွဲကိုရပ်လိုက်ရထဲက တော်တော်ကို အဆင့်မရှိသလိုခံစားမိသွားတယ်။
အရှုံးကို ရင်မဆိုင်ရဲလို့ ရမ်းကားတာ
အိုမန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဘူး ၊ နဂိုကမှ တစ်ခုခုဆို “You guys Burmese” အစချီပြီး အထင်သေးသလိုဆက်ဆံခံနေရတဲ့ကြားထဲ။
မြန်မာ ပြည်မှာ လုပ်စရာနေရာအများကြီးပါ။
ဒီလိုအကျင့်ဆိုးတွေကဒီမှာတင်မဟုတ်ဘူး စတိတ်ရှိးတွေမှာလဲတွေ့ဘူးတယ်…တော်ပါတော့ဗျို့ အောက်ဆင်းပါတော့ ဆဲတာတွေကပါသေး…ဆိုတဲ့သူကိုအားနာဘို့ကောင်းတယ် ကိုယ်မကြိုက်ပေမဲ့ ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတာသိဘို့ကောင်းတယ်…….
ကိုယ့်မြေမှာ လာကန်တာကိုတောင် ရှုံးအောင်ကန်တာကပဲ တော်တော်၇ှက်စရာကောင်းနေတာ
အခုတော့ ပြသာနာပါ၇ှာတယ်ဆိုတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့
ဖတ်ချင်တော့ဘူး…..တော်ပါတော့…ပို့စ်တွေက ဒါကိုပဲဝိုင်းရေးနေကြတာ။ တောာ်ပြီပေါ့တစ်ယောက်ရေးရင်။
ကိုယ့်ခံစားချက် ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်အရေးတွေမို့ လက်ခံရမှာပေ့ါ။
အားပါး တော်တော်ကိုရှုံ.ချထားတာပါပဲလား ထားပါတော.ဗျာ မြန်မာပိရိတ်သတ်တွေရိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ ရိုင်းတယ် ဒါပေမယ်. ပရိတ်သတ်တွေ ဆိုးတယ်ဆိုတာ ၅၀% ပဲမှန်တယ်လို.ယူဆတယ်ဗျာ ကျနော်.ရဲ.ဒီရွာထဲက အစ်ကိုအစ်မတို.အဲ.ဒီပွဲသွားကြည်.ဖြစ်ကြလား မကြည်.ဖြစ်ရင် ပွဲထဲ မရောက်ခင် အပြင်မှာဖြစ်နေတာလေးတွေနည်းနည်းနားစွင်.လိုက်အုံးဗျာ ဒီမှာလင်.လေးတွေရှိတယ်
ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ စကားက ဒီနေရာမှာ ပြောဖို့ ဖြစ်တယ် (အတိအကျတော့ မတူပါ ဗိုလ်ချုပ်လေသံ တုပြီး ရေးထားတာ)
ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိယင် ဗမာတွေ စိတ်ထဲမှာ ဗမာတွေဟာ စိတ်ဓာတ် ထက်တယ် ဘာညာနဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ အတူတူဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီနေရာမှာ သုံးဖို့ဟာတွေဘဲ။ ဗမာတွေစိတ်ဓာတ်က မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ သွားပြီးကောင်းနေတယ်။ တကယ့်နေရာတွေကျတော့ အသုံးမကျဘူး။ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရအောင်ဆိုတာမျိူးမှာ အသုံးမချတတ်ဘူး။ ဗမာပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်တဲ့နေရာမျူိးမှာ အသုံးမချတတ်ဘူး။ ဗမာ ဗမာချင်းချဖို့မှာ လုပ်ချင်တယ်၊ အဲဒါမျူိးတွေ လုပ်ချင်တယ်။ ဒါမျိူးတွေလုပ်ချင်လို့ ဘယ်တော့မှ အကျူိးမရှိဘူး။ ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ ပြန်လည်မထူထောင်နိုင်ဘူး။ ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ မလွတ်လပ်နိုင်ဘူး။ လွတ်လပ်ယင်လဲ ဘယ်တော့မှ ကျကျနန လွတ်လပ်ရေး မဖြစ်နိုင်ဘူး။
(ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၊ ၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၃၊ မြို့တော်ခန်းမ)
“ကျနော်တို့ ဗမာတွေမှာ အကျင့်တခုရှိတယ်။ ဘာလည်းဆိုရင် . . . . . ဒါကလည်းဘဲ ကျနော်တို့ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကျနော် ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ပုသိမ်ဖက်ကို သွားတဲ့အခါ လှေပြိုင်ပွဲတခုရှိတယ်။ လှေပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ လှေပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတော့ လှေတွေ ပြိုင်လိုက်တာ နှစ်စင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာ နိုင်တဲ့အစင်းက ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။ ရှေ့ကို နဲနဲရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ တက်ထောင်တယ်။ ကြွားတာ ကြွားတာ။ တခါ ရှုံးတဲ့အနောက်က နေတဲ့လှေကလည်းဘဲ ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။ ကြိုးစားချင် ကြိုးစားနိုင်သေးတယ်။ မကြိုးစားတော့ဘူး။ ရှုံးတော့မှာပါပဲကွာဆိုပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့ တယ်မခတ်ချင်တော့ဘူး။”
အဖေ..သူတို့ နာကျည်းချက်တွေအဲ့ ဒိမှာပြလိုက်မယ်လို့ ..